FAQ IQoption, Featured, Vaovao IQoption & torohevitra
IQOption » FAQ IQoption » Why my IQOption account was blocked/ suspended and I can’t login
Misy antony ny IQ Option voasakana ny kaonty. Ny hatao? Aza mikoropaka. Raha naato izany ary tsy afaka miditra aloha ny fanohanan'ny contact.
Fanambarana malaza nojeren'ny mpivarotra anay amin'ny forum an-tserasera:
Tsy afaka miditra amin'ny kaontiko aho - naato tokoa ilay kaonty. Na voasakana ny kaontiko IQ Option - Inona no tokony hataoko?
Andao hiresaka momba ny hoe matetika ny IQ Option dia manakana ny kaonty tsy misy alalana avy amin'ny tompony ary maninona no mety hitranga izany:
Mety misy antony roa manakana ny kaonty:
Rehefa mahita kaonty maromaro ny IQ Option. Aza adino fa tadidio ny mpanjifa mba hisoratra anarana kaonty 1 (iray) fotsiny amin'ny broker. Noho izany, ny broker IQ Option dia mitazona ny zony hanakana ny kaonty noho ny fandikana ny politika IQOption;
Rehefa mampandre ny varotra mampiahiahy amin'ny kaontin'ny mpivarotra ny departemanta vola IQ Option. Amin'ny tranga toy izany dia mety hampiato ny kaonty izy ireo ary hangataka amin'ny tompony hanamarina ny fandidiana;
Rehefa mampiasa mpivarotra fampahalalana momba ny fandoavam-bola olon-kafa ny mpivarotra hametrahana na hisintona azy amin'ny sehatra. Zava-dehibe indrindra ho an'ireo mpivarotra ny mampiasa ny karany manokana sy ny e-poketra mba hisorohana ny famotsiam-bola;
Rehefa minia manome ny antsipiriany diso momba ny mombamomba azy manokana ny tompon'antoka kaonty, ohatra, dia mety hitranga amin'ny mpanjifa tsy ampy taona izany, izay nanondro daty nahaterahana na olona nanoratra kaonty misy ny anaran'ny olona ao an-tranony / sakaizany;
Raha mponina / mponina ao Aostralia, Etazonia, Israel, Sudan, Belzika, Syria, Korea Avaratra, Japon na Iran i mpanjifa.
Rehefa mandà ny hanome ny rakitra ao aminy ny mpivarotra hanamarina ny kaonty sy hanamarina ny mombamomba azy;
Izay takiana aminao raha tsy afaka miditra amin'ny kaontinao ianao:
Raha tsy mandeha aloha ny fidirana dia alao antoka fa mametaka ny teny miafinao sy fampahalalana momba ny fidirana ianao;
Diniho ny lahatahiry Inbox sy Spam ary zahao mailaka avy amin'ny fanohanana mifandraika amin'ny kaonty varotrao;
Raha heverinao fa manaraka ny zava-drehetra dia azonao atao ny miantso ny fanampiantsika avy hatrany amin'ny alàlan'ny adiresy mailaka [email protected] hahazoana ny antsipiriany takiana ary hanafoana ny kaonty.
Raha vantany vao azon'ny IQ Option fanohanana ny fisie na ny porofo hafa milaza fa ara-dalàna ny hetsika dia eken'ny ekipa mpanohana IQ Option avy hatrany ny kaonty.
Aza matahotra ary tadidio:
Tsy misy kaonty voasakana tsy misy antony matanjaka.
Ny fisakanana dia tsy misy antony, ILLEGAL ary mety hiato ny asan'ny IQ Option ankehitriny. Misy mpivarotra 15 tapitrisa mahery ao amin'ny IQ Option ary miaraka amina famolavolana sehatra iray mahafinaritra kokoa aza dia hisy mpivarotra maro kokoa.
Azafady miantso mivantana ny IQ Option Support amin'ny zavatra rehetra tianao ho fantatra. Matetika ny olona iray dia mamela ny fanamarihana mamitaka ampian'ny fihetsem-po na ny singa hafa fa tsy mifandraika amin'ny antony tsy miangatra.
← Hevitra 4 momba ny fomba hampihenana ny fatiantoka sy hampitomboana ny fiovam-po Find out the marketing tricks to get user attention →
IQoption Robots - mandeha ho azy amin'ny iqoption